12 Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 12 Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke
Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Russia, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Train Travel USA, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 13/05/2022)
Intsha, amathuba ezezimali, izingqondo zokudala, futhi ukufinyelela emakethe okuhamba phambili yizici eziphezulu zehabhu lokuqalisa elichumayo. Lezi 12 izindawo zokuqalisa eziphezulu emhlabeni wonke ziheha izingqondo ezinekhono ukuze zisungule futhi zondle imibono yazo emihle, Amaqembu e-IT, nokuxhumana ukuze uqhubekisele phambili iziqalo ezimangalisayo. Ukusuka eShanghai kuya eBerlin, lezi zinhlelo zemvelo eziphezulu zokuqalisa ziqine kakhulu emhlabeni.
1. Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke: Barcelona
Idume phakathi kwabasunguli bokuqalisa bakwamanye amazwe, Barcelona, ingelinye lamahabhu okuqalisa ahluke kakhulu emhlabeni wonke. Okokuqala, I-Barcelona inikeza inani elingcono kakhulu lemali, mayelana nokuqashwa kwendawo yamahhovisi, indawo yokuxhumana, imithethonqubo, kanye nokukhula kokutshalwa kwezimali. Okwesibili, I-Barcelona inenani elikhulu labasunguli bezobuchwepheshe abanamakhono, ngisho nangaphezu kweTel-Aviv. Okwesithathu, phakathi kwezindawo eziningi zokuqalisa zaseYurophu, I-Barcelona imayelana nokunikeza abasunguli besifazane ithuba, abathuthukisi, and digital professionals.
Konke lokhu okungenhla kubeka iBarcelona phezulu 5 izindawo zokuqala emhlabeni wonke, and the 7th fastest-growing tech community in Europe.
Ukuqala Okuthembisayo e-Barcelona:
x1 umoya, Amenitiz, Koa Health.
Njengelinye lamadolobha anabantu abaningi eYurophu, I-Moscow inomnotho omkhulu, kanye nomhlabathi ovundile wezingqondo ezinkulu ukuba zihlangane. Ngaphezu kwalokho, I-Moscow yidolobha elinabantu abaningi, ubukhazikhazi, kuyajabulisa, abasha, ezingeni elifanayo nelaseLondon neParis.
Ngakho, IMoscow iheha osomabhizinisi abaningi abasebasha abavela kuwo wonke umhlaba, ukusebenza hlanganisa amandla namakhono endawo ezindaweni ezikhulayo zokusebenzelana edolobheni. Ngakho, inani eliqala phansi leziqalo eMoscow selifinyelele eqophelweni eliphezulu 1900.
3. Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke: Paris
Nezindawo ezinkulu zokusebenzisana, imithethonqubo ethuthukisiwe, izinketho zezimali, nama-incubators amangalisayo, I-Paris iyisikhungo esikhulayo sokuqalisa eYurophu. Nakuba idolobha liyisizinda semfashini esidumile, isiphenduke i-ecosystem enhle kakhulu yokuqala.
This immense rise is thanks to the world-renowned universities, ikakhulukazi ikhono lobunjiniyela kanye nabathweswe iziqu abanamakhono. Ngaphezu kwalokho, the network of incubators like Silicon Sentier and its famous La Cantine co-working space. Ngezinzuzo ezinjalo, I-Paris ihamba phambili kumahabhu obuchwepheshe aseYurophu.
Okwesimanje, eco-friendly, uzibuthe kwabangaphandle, Singapore is one of the amadolobha amahle kakhulu to live in and launch your own startup. Ngaphezu kwalokho, I-Singapore iye yamukelwa ngosomabhizinisi abaningi njengendawo engcono kakhulu e-Asia yokukhulisa ibhizinisi lakho, ukuphusha iHong Kong eceleni emqhudelwaneni.
5. Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke: Berlin
Ngo 2016 idolobha leqembu laseYurophu linqobe iParis njengesizinda sesibili esikhulu sokuqalisa eYurophu. I-ecosystem yokuqala eBerlin ibilokhu idlondlobala kusukela lapho, ngenani leziqalo ezintsha ezikhula unyaka ngamunye, ngaphandle kokukhetha. Indawo yokuqasha ephansi, kanye ne-visa elula, yenza ukuheha osomabhizinisi abaningi eBerlin, ebeka idolobha phezulu 10 izindawo zokuqala ezibaluleke kakhulu emhlabeni jikelele.
Idolobhakazi lidume ngenye indawo yekilabhu, ihabhu lobuciko eliyingqayizivele, kanjalo ngokusobala, umkhathi wedolobha kanye nengqalasizinda kuyisisekelo esihle sokuqala ukuqala nsuku zonke. Ngaphezu kwalokho, maningi amathuba okuthi osomabhizinisi bakhuthaze ukuqala kwabo, uthole omunye umjikelezo woxhaso, futhi wenze ukuxhumana emicimbini eminingi eyenzekayo eBerlin.
Iziqalo Ezithembisayo zaseBerlin:
Omio, I-Coachhub, infarm
Enye yezindawo ezihamba phambili zokuqalisa eYurophu, ILondon ikleliswe njengenombolo 1 eminyakeni embalwa edlule enanini lokuqalisa okusebenzayo. ILondon ihamba phambili ekuqaliseni kwezobuchwepheshe nezezimali, with an annual investment record of 8.4 i-euro eyizigidigidi 2019.
Ngenkathi iLondon ingenye yezindawo zokuqala ezibiza kakhulu emhlabeni jikelele, abasunguli abaningi bokuqalisa bakhetha isikhathi nesikhathi, sibonga ukufinyelela okumangalisayo kwezimali. Ngaphezu kwalokho, Izindawo zokudlela zaseLondon, ezinkantini, imicimbi, kuyinkundla enhle yokudala ukuxhumana endaweni ehamba kalula.
Iziqalo Ezithembisayo zaseLondon:
I-Transferwise, I-Revol, I-Hopin.
7. Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke: I-Tel-Aviv
Ngenani eliphakeme kakhulu lokuqalisa emhlabeni, ka 1 ukuqala kwawo wonke umuntu 154 izakhamizi, Tel-Aviv is one of the top 7 izindawo zokuqala emhlabeni wonke. Esinye sezizathu ezibeka iTel-Aviv njengendawo ehamba phambili yokuqalisa, ukuthi idolobha lizishaya isifuba ngo-R&D izikhungo, izingqondo zokudala, kanye nezinkampani ezikhuluma izilimi eziningi.
Ngakho-ke, akumangazi ukuthi iTel-Aviv inokungaphezu kwalokho 60 iziqalo ezisohlwini lwe-NASDAQ. I-Tel-Aviv ihamba phambili nge-AI kanye nokuqalwa kwe-cybersecurity, ukukhulisa $2.9 Isigidigidi singenile 2020 kuphela. Ngakho, if you are aiming to enter Tel-Aviv’s startup nation, zilungiselele ukuxoxisana okunzima nosomabhizinisi nabesilisa bakwa-Israel abanolaka.
Ukuqala Okuthembisayo kwe-Tel-Aviv:
Wix, UMsombuluko, futhi abaningi.
8. I-Silicon Valley
Indawo yokuqala yokuqala emhlabeni iSilicon Valley. Indawo engcono kakhulu emhlabeni yokwakha eyakho isiqalo futhi wenze izinjini zihambe iseNyakatho yeCalifornia. Idume emhlabeni wonke ngokusungula isikhungo sayo sobuchwepheshe, I-San-Fransisco iyi-incubator yokuqala yokuqala.
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuze iziqalo zikhule futhi zichume imithetho eqinile futhi enobungane. Ngamanye amazwi, isiqalo asikwazi ukuchuma ngaphandle kwemibono yakhona, intuthuko, nezingqondo zigcinwe ngumthetho. Ngakho, I-Silicon Valley iheha izingqondo eziningi ezivela kuwo wonke umhlaba, futhi kukhona mayelana 40,000 Ukuqala okuzinze eSilicon Valley.
9. Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke: Amsterdam
Liberal, ukwamukela, futhi uphile, imigwaqo kanye nemisele yase-Amsterdam inomoya futhi iyakhuthaza. Emzini ozidla ngokuvuleka, ubuhlakani, futhi art, you will not be surprised to learn that Amsterdam’s startup hub is one of the most booming worldwide. Ranked as the 4th most creative city worldwide, Isiteji sokushintshana sedijithali esizinzile sase-Amsterdam siheha abasunguli bokuqalisa abavela emhlabeni wonke.
Ngakho, uma ubheka ukutshala imali, noma nishintshane ngemibono ngezingqondo ezihlakaniphe kakhulu, I-Amsterdam kufanele ibe indawo oya kuyo ukuze uqalise ukutshalwa kwezimali.
Ukuqala Okuthembisayo e-Amsterdam:
UDkt., Dyme, Indiza.
Umqondo wokusebenza kanzima waseShayina ube yingxenye yemvelo yedolobha kanye nekhono elimangalisayo lokulungisa 15 ama-unicorns asedolobheni. Nakuba iziphathimandla zendawo zidume ngemithetho yazo eqinile, Imicimbi yokuqala efana ne-Startup Weekends kanye nama-Barcamps e-Shanghai idala inhlabathi evundile yesisekelo sama-unicorn endawo..
Ngaphezu kwalokho, Imakethe yamasheya yaseShanghai ihlale isebenza ekuheheni abaqalayo abasha, kanye nokukhulisa izimali ezinkulu. Kusukela kuzinhlelo zokusebenza ze-e-Commerce kuya ku-E-Learning, Ukuqala kwe-Shanghai’ ihabhu liziqhayisa ngokuguquguquka nokuqamba okusha.
Ukuqala Okuthembisayo e-Shanghai:
Liulishuo, I-Pinduoduo, Okubomvu.
10. Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke: i-Hong Kong
Ngezingqungquthela ezinhle zokuqalisa, izintela eziphansi, namazinga enzalo, I-Hong Kong iyisistimu ye-ecosystem ekhulayo e-Asia. Laziwa njengedolobha laseNtshonalanga kakhulu e-Asia, I-Hong Kong ingeyesimanjemanje, egcwele ukubukwa okumangalisayo futhi amabhilidi, ngakho isibhakabhaka singumkhawulo. Ngenkathi iHong Kong idume ngesibhakabhaka sayo esimangalisayo kanye nemibono yekusasa, the startup’s landscape is mostly finance and fintech.
Ngakho, phakathi kwama-unicorn amaningi edolobheni, uzobona ikakhulukazi ama-unicorns we-Fintech, kanye nesoftware $ Idatha. Ngaphezu kokuthungatha amathalente endawo, the local co-working spaces in Hong Kong are most welcoming to bright foreign minds. CoCoon, I-Hive Hong Kong, Ilebhu Enhle izikhala ezimbalwa nje ezinhle zokusebenzisana, ukusebenza ngokubambisana nokuheha abasunguli abavela ngaphandle kwe-Asia.
Ukuqala Okuthembisayo eHong Kong:
I-Gatcoin, Cashyou, IP Nexus.
Umsuka we-Xiaomi, Amabhilidi aseBeijing yilapho okuqanjwa khona, ubuchwepheshe, kanye nethalente lihlangana ukuze kuxoxiswane. Idizayini yesikhathi esizayo yaseBeijing iyisikhuthazo sehabhu yokuqalisa ematasatasa e-Asia. Ngakho-ke, edolobheni kuphela baningi kune 30 ama-unicorn, founded by the city’s gifted minds.
Ngaphezu kwalokho, I-Beijing ivelele phakathi kwe 12 amahabhu okuqalisa aphezulu emhlabeni wonke ngobuchwepheshe bawo obuyingqayizivele nobuthuthukayo. Ngokwesibonelo, E-Beijing’ I-ecosystem yokuqala inothile ngama-unicorns ahlanganisa ukufunda okujulile nokufunda ngomshini, kanye nobuhlakani bokwenziwa.
Ukuqala Okuthembisayo e-Beijing:
I-WeChat, I-Baidu, I-ByteDance.
12. Izikhungo Zokuqala Eziphezulu Emhlabeni Wonke: I-Munich
Ukuba nokukodwa okuphezulu 3 izigcawu zokuqalisa ezixhumeke kahle, I-Munich ine-ecosystem enhle yokuqala. Ngaphezu kokuba yindawo enhle yokwenza ukuxhumana nokudala amathuba okuvumela, I-Munich inesilinganiso se 290% investment growth annually.
Ngenxa yalokho, I-Munich inenani eliphakeme kakhulu lokuqalisa emhlabeni jikelele, ukuvuleka kwemisebenzi eyahlukene, and the top startups in Europe.
Lapha e Londoloza Isitimela, siyajabula ukwabelana nawe Phezulu 12 Izikhungo Zokuqalisa Emhlabeni Wonke.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Phezulu 12 Izikhungo Zokuqalisa Emhlabeni Wonke”Kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Ftop-startup-hubs-worldwide%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)